26/09/2013 is the 6th Anniversary of Burmese Buddhist Monks’ Revolution against Military Dictatorship in Burma « Burma Democratic Concern (BDC)
Home » Burma Democratic Concern (BDC) » 26/09/2013 is the 6th Anniversary of Burmese Buddhist Monks’ Revolution against Military Dictatorship in Burma
26/09/2013 is the 6th Anniversary of Burmese Buddhist Monks’ Revolution against Military Dictatorship in Burma
ဆရာတော်ဦးဥတ္တမ, ဆရာတော် ဦးဝိစာရ, ဆရာတော် ဦးဝီရသူ, ဆရာတော်ဦးထာဝရ နဲ့တကွ အားလုံးသော သံဃာ့ အာဇာနည် များကို ဦးညွတ် ဂါရဝ ပြုပါသည်။
၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ နှစ်ဆယ့်ခြောက် သံဃာတော်သွေး မြေခရောက်
ကျေးဇူးကြီးပေ သံဃာတော် တွေ ပြည်သူ့ရှေက အမြဲနေ
ကိုယ်ကျိုးမဖက် အမျိုး ဘာသာ သာသနာ အတွက် သံဃာတော် တွေ အမြဲရပ်
မြန်မာ ပြည်ကြီး ကောင်းစားအောင် ဒို့သံဃာ တွေ အမြဲ ဦးဆောင်
လူထု သံဃာ ညီညာစွာ လက်တွဲထား ဒို့အောင်ပွဲကိုအရောက်သွား။
လူယုံသတ်လို့ သေတတ်သည်။ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~
ဘာသာပေါင်းစုံနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူတကွ နေထိုင်ရေးသမား ဦးဝီရသူ၏ တရားပွဲမှာ ဗုံးဖောက်ခွဲသူများကား ဦးဝီရသူနှင့်ချစ်ကြည်ရေးလုပ် အယုံသွင်းနေသူများသာ ဖြစ်သည်။
အတိတ် ပစ္စုပန် ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်သမိုင်းသည…် သမိုင်းရှင်၏ အနာဂတ်ပန်းတိုင်ပင်ဖြစ်၍ သူတို့၏ ချစ်ကြည်ရေးကို ယုံစားမိလျှင် လူယုံသတ်လို့ သေရမည့်ကိန်း ဆိုက်ပါလိမ့်မည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားများကား သဒ္ဒါလွန်ကဲ့ ပညာနဲ၍ အလွဲကျင့်လွယ် ယုံလွယ်သူများဖြစ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံ တော်တော်များများ ဘာသာခြားလက်အောက် အရောက်ခံခဲရ၊ နာလန္ဒာတက္ကသိုလ်အတွင်း မီးလောင်တိုက် အသွင်းခံခဲကြရသည်ကလည်း သမိုင်းသက်သေဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင် ဆရာသမားနေရာကနေ၍ သာသနာ့ဝန်ထမ်းဆရာတော် သမားတော်လုပ်နေကြသည့် ရဟန်းတော် တော်တော်များများ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းများကို ရဟန်းအလုပ်မဟုတ်ဘူး မလုပ်ကောင်းဘူးဟု ယူဆနေကြသည်။
စာသင်စာချ တရားဟော တရားပြအလုပ်သာ ရဟန်းအလုပ် ဘုန်းကြီးအလုပ်ဟု အမြင်ကျဉ်းမြောင်းစွာ ယူဆနေကြသည်။
မြန်မာပြည်မှာ ရဟန်းသာမဏေ (၅)သိန်းမျှ ရှိပါလျှက် ဒီလောက်အရေအတွက် မရှိတဲ့ ဘာသာခြားတို့၏ ထိုးဖောက်လွှမ်းမိုးမှုခံနေရတာ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာ့ဝန်ထမ်း ရဟန်းသံဃာတော်များ တာဝန်မကျေဘူးလို့ သမိုင်းတရားခံအဖြစ် လက်ညှိုးထိုးစရာ ဖြစ်နေကြောင်း အသက်(၂၀)ကျော် မိန်းကလေးတစ်ယောက်၏ ကောက်ချက်ချ စွပ်စွဲလျှောက်ထားမှုကို ခံခဲ့ရဘူးသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဟန်းတော်များအနေဖြင့် အလှူမသာ ဘုရားပွဲကျောင်းပွဲ အလှူခံကြွ ဘုရားတည် ကျောင်းဆောက် လှေကြီးထိုးရိုးရိုး စာချ တရားပြရုံဖြင့် တာဝန်ကျေမည် မဟုတ်။
ထို့ကြောင့် ဒေါက်တာအရှင်ဥာဏိဿရ သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးက အင်းစိန်ရွာမဆရာတော်ကြီး ယောပိဋက ဆ၇ာတော်ဘုရားကြီး အမှုးရှိသော ပရိယတ် ပဋိပတ်ဝန်ဆောင် သံဃာ့ဥသျှောင် ဆရားတော်ကြီးများ ဦးဆောင်သော အမျိုး ဘာသာ သာသနာ စောင့်ေ၇ှာက်ရေး အဖွဲ့ကြီးက အမျိုးစောင့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေး ၊ အမျိုး ဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေးကိစ္စများကို သမိုင်းပေးတာဝန် တစ်ရပ်အနေဖြင့် တာဝန်ကျေအောင် နှိုးဆော်ဆောင်၇ွက်နေပါသည်။
အရှင်ဘုရားကော တာဝန်ကျေပါပြီလော။ သူတို့က မျက်နှာချိုလေးနဲ့ ဈေးချိုချိုရောင်းလို့ အယုံသွင်းနေသည်ကို ယုံစားမိလျှင် တာဝန်မကျေ လူယုံသတ်လို့ သေနေပါမယ်။ သတိကြပ်ကြပ် ထားကြပါကုန်လော။
ရဟန်း ရှင် လူ မည်သူမဆို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုသမျှ တာဝန်ရှိသည့်အတိုင်း အမျိုး ဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေး တာဝန်ကြီးကို ဦးလည်မသုန် ထမ်းရွက်ကြပါကုန်လော။
♪♫ ♪ ♫ ♪ အာဇာနည် ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသားတိုင်းပြည် ၊ ရာဇဝင် ရှေးထုံးစဉ်လာ ထွန်းတောက်ခဲ့ပေ။ ပိုင်ဆိုင်သူ ဘိုးဘွားဘီဘင် တို့အမွေ တို့ပြည် တို့မြေ ။ ♫ ♪ ♫
ဒို့မြန်မာတွေ ဒါဒို့မြေဟု ဆိုနေကြစဉ် မွတ်ဆလင်က တွင်တွင်ငွေစု ငွေကျွန်ပြု၍
ဟိုလူကိုခိုင်း ဒီလူ့ခိုင်းနှင့် ရှုတိုင်းမငြီး ဒို့သမီးကို ဇနီးလုပ်ထား သားမြေးပွားလျက်
လူအားငွေအား နောက်ခံအားဖြင့် ဒို့များဘာသာ မျိုးဖျက်ကာလျှင် များစွာစော်ကား ခံရများပေါ့။
ဒို့များမနိုင် ဒို့မပိုင်ပါ ခုလိုသာဖြင့် မကြာယခု ဤရာစုပင် မဆုံးခင်ပဲ ဘာသာလည်းပျောက် လူမျိုးပျောက်လိမ့်၊
ထိုနောက်တစ်မျိုး ဘုရားခိုးဂိုဏ်း ခေါင်းဖြတ်ဂိုဏ်းလည်း တစ်တိုင်းပြည်လုံး ပျောက်ပျက်ဆုံးအောင်
ငွေလုံးငွေရင်း လိုတိုင်းနှင်းကာ ဒို့ဘာသာ ဖျက်တာသူတို့ မဟုတ်လား။
ဒါကိုသိလျက် ဒို့မြေထက်တွင် ဆက်လက်မွေးစား အမျိုးသားသီချင်း ဆိုနေခြင်းကား
တောတွင်းမြိုင်ခွင် ပညောင်ပင်ကြီး ပွင့်အသီးတို့ ပွင့်သီးလေရာ ဒါငါ့ဟာဟု ခါခါအော်လျက်
မယှငှက် ၀ဲလျက်ပျံစဉ် ငှက်များဖြင်တို့ အုံအင်ဝိုင်းစား ပြန်ကာသွားသို့ မခြားတူစွာ မဖြစ်ပါလား။
မှန်စွာနိမိတ် အတိတ်ကိုကြည့် နာဂတ်သိမှန် ပြောရပြန်က မြန်မာ မက တစ်ကမ္ဘာလုံး
တစ်အုံးအုံးထ ခံနေရတဲ့ ကမ္ဘာ့ရန်စွယ် အန္တရာယ်သာ မဟုတ်ပါလား။
ကမ္ဘာကသိ ခုထက်ထိအောင် မသိမလိုနေတာ ဒို့မြန်မာမဟုတ်ပါလား။
~ ရန်သူကို မသိလို့ အငိုက်မိကာပေ
~ ခံရလျှင်အမှန် ခံရပါစေတော့
~ သိလျက်ပါကို ကြောက်လို့သာ ဆိုလျှင်ဖြင့်
~ ခံရလျှင် ဒို့သမိုင်း ရိုင်းတော့မပေါ့။
( မျုိးချစ်သူ )
Global ခေတ်မှာ ရွှေမြန်မာတွေ ကမ္ဘာနှင့် မြန်မာကို မျက်စိဖြဲပြီး ကြည့်ကြပါ …..
” အယူဝါဒ ဘာသာတရား မည်မျှပင် ကောင်းမွန် မှန်ကန်ပါသော်လည်း စောင့်ထိန်းသူ၊ ကာကွယ်သူများ ညံ့ဖျင်းပါက လျှင်မြန်စွာ ပျောက်ကွယ်တတ်တယ် ” ဆိုတာ သာဓက ယူသင့်ပါတယ်။
တချိန်က ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားခဲ့တဲ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဟာ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ လူအင်အားတိုးပွားနှုန်း (မွေးဖွားနှုန်း) မဟာဗျူဟာတွေနဲ့ ချီတက်ရင်း ယနေ့အချိန်မှာတော့ အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံ ထူထောင်ရေး အန္တိမပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိနေခြင်းတွေကလည်း မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက် အကောင်းဆုံး သင်္ခန်းစာတွေ ဖြစ်နေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးကပေးနေသော များပြားလှသော ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ မွတ်ဆလင်အန္တရာယ် သင်္ခန်းစာကိုမယူနိုင်ဘူးဆိုလျှင်တော့ မိမိတို့ထက်မိုက်သော၊ မိမိတို့ထက်ညံ့သော၊ မိမိတို့ ထက်တာဝန်မကျေသော၊ မိမိတို့ထက် သမိုင်း၏ တရားခံဆိုးများ ရှိတော့မည် မဟုတ်ပေ။
အမိမြန်မာပြည်မှ သာကီနွယ်ဘွား မြန်မာပြည်သားတို့ အနေဖြင့် တချိန်တခါက ဗုဒ္ဓသာသနာတော် နေရောင်၊ လရောင်ပမာ ထွန်းလင်းတောက်ပခဲ့ပြီး ယခုအချိန်၌ ကမ္ဘာကြီးကို အခြိမ်းခြောက်ဆုံးသော၊ အန္တရာယ်အပြုဆုံးသော နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အီရတ်၊ အီရန်၊ အာဂနစ္စတန်၊ ပါကစ္စတန်၊ တာကစ္စတန်၊ ဥဇဘက္ကစ္စတန်၊ ဂေါ်ဒန်၊ ဆီးဒီယားနိုင်ငံတို့ကဲ့သို့ မဖြစ်စေရန် ကမ္ဘာကြီးက ပေးနေသော များပြားလှသည့်၊ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ၇၈၆ မွတ်ဆလင် ကုလားဆိုး အကြမ်းဖက်သမားများ၏ အန္တရာယ် သင်္ခန်းစာကို အရယူကာ ဆရာ၊ ဒကာ လက်တွဲကာဖြင့် တိုင်းပြည် နှင့် အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာတော်ကြီးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြပါစို့ … ရွှေမြန်မာတို့။See more
Ko John‘s photo.
Wai Hun Aung‘s photo.
သင်.. ဒါတွေကို သိသလား ——————— မြန်မာပြည်သူတွေ “၀ိတိုရိယ ဘုရင်မ ကျန်မာပါစေ ၊ ချမ်းသာပါစေ”လို့ ဆုတောင်းနေချိန်မှာ တောက်သီးခေါက်ပြီး ဗြိတိသျှ ဘုရင်ခံ ဂရက်ဒေါက်ကို Get Out လို့ နှင်ထုတ်ဝံ့ခဲ့သည့် အသျှင်။
ဘာသာစကား ရေး၊ ပြော၊ ဖတ် …ကို (၉)ဘာသာထိ တတ်မြောက်ပြီး (၁၂)မျိုးကို အကြမ်းအားဖြင့် ပြောနိုင်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဟိန္ဒူအသင်းတော်ကြီးမှာ ဥက္ကဌနေရာကို ရယူပြီး ဗြိတိသျှ အင်္ဂလိပ်ကို အကြမ်းမဖက် အနုနည်းနဲ့ တိုက်ခိုက်ဖို့ မျိုးစေ့ကို ချပေးခဲ့သူ အသျှင်။
MPT ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်လေးတစ်ခုတင်တာ နံနက် ၈ နာရီလောက်ကနေ တင်တာ အခုမှပဲ အွင်းလိုင်းပေါ်ကို ရောက်တော့တယ်..။See more
Wira Thu‘s status.
“သွေးစက်တွေနဲ့ပေးဆပ်ခဲ့လေသော ရခိုင်ရဟန်းတော် အာဇာနည် အရှင်ဥတ္တမ” ============================================
၁။ “ဂုဏ်ယူပါသည် ဆရာတော်ဘုရား” ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ကာရက်ဒေါက် ကိုးဆက် ရဲရဲတောက် တပ်လှန့်သံဖြင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမျ…က်စိကို စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး၊ ကျွန်စိတ်ဓာတ်ကို ဖျောက်ဖျက်ပေးခဲ့သော ပထမဦးဆုံး လောကအလင်းရှင်အဖြစ် အကြမ်းမဖက် ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းစဉ်ဖြင့် တော်လှန်ရေးဦးဆောင်ခဲ့သော ပထမဦးဆုံးသော မြန်မာရဟန်းတော် တစ်ပါးအဖြစ် ဂုဏ်ယူ လျက်ပါဘုရား။
၂။ “သံဝေဂရဖွယ်ပါ ဆရာတော်ဘုရား” ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ခေတ်ကောင်းစဉ်က လက်ခုပ်သြဘာများဖြင့် ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုခံခဲ့ရသလို ခေတ်မကောင်းချိန်မှာ လမ်းဘေးလူနာဘဝ အထီးကျန်ပုံစံမျိုး လောကဓံအလှည့်အပြောင်းခံခဲ့ရသော ဆရာတော်ဘုရား ဖြစ်ရပ်ဟာ နိုင်ငံရေးရဟန်းတော်များအတွက် သင်္ခန်းစာ အကြီးကြီး ရစေပါတယ်ဘုရား။
၃။ “မြန်မာပြည်ရဲ့ အတွက် ပါရမီဆရာတော်ဘုရား” ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• မြန်မာ့နိုင်ငံရေး မီးရှူးတန်ဆောင် အသက်သွေးချွေးပေးဆပ်ခဲ့သော မြန်မာရဟန်းတော်တစ်ပါး ပျံလွန်တော်မူပြီးမှ ရရှိလိုက်သည်က ကျောက်တိုင်လေးတစ်ခုနှင့် ပန်းခြံလေးတစ်ပါဘုရား။
Win Maw Shwethanzin‘s video.
ဒီ Documentary လေးကတော့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ၃ နှစ်ပြည့်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ နံရံလေးဘက်ကြားထဲကနေ ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ၆ နှစ်ပြည့် ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ မူလအတိုင်းမပြင်ဆင်ဘဲ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ နောက်ခံတီးလုံးအမည်ကို Saffron… Revolution (or) Freedom လို့ပေးထားပါတယ်။ လက်ရှိ ရွှေသံစဉ် ရဲ့ Stageshow တိုင်းမှာ အဖွင့်တီးလုံးအဖြစ်တီးခပ်လျှက်ရှိပါတယ်။ (Free Burma VJ ကလည်းသူတို့ရဲ့ Campaign တွေမှာဒီတီးလုံးကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်)See more
မြန်မာ.သွေး ပုဂံသား‘s photo.
လောလောဆယ် အမျိုးကို စောင့်ထိန်းဦးလို့ ဆိုလာတဲ့ နေထက်လင်း ======================================
အခု အမျိုးစောင့်ဥပဒေထုတ်ပြန်တဲ့အပေါ်မှာ ဘယ်လိုမြင်လဲ။ တိုင်းမဂ္ဂဇင်းက ပြောထားတာတွေကို ကျွန်တော်လက်မခံဘူး။ အမျိုးပျောက်သွားရင် ဒီနိုင်ငံကို ဘယ်သူက…ယ်တင်မှာလဲ။ ကယ်မယ့်သူ မရှိဘူး။ ဖျက်ဆီးမဲ့သူပဲ ရှိတယ်။ ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ ကျွန်တော်တို့ ကယ်တင်တာပဲ။ အဲဒီဘုန်းကြီး မှန်တာပဲ။
ဒါ လုပ်သင့်တယ်။ အမျိုးကို စောင့်သင့်တာပေါ့။ အခု လူမျိုးတွေ ရောကုန်ပြီ။ အမျိုးကို စောင့်တဲ့ဥပဒေဆိုတာ ထားရမယ်။ ဒီနိုင်ငံ ဘာနိုင်ငံလဲ။ ထေရ၀ါဒနိုင်ငံ မဟုတ်ဘူးလား။ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည် ပျောက်သွားမယ်။ မလေးရှား ဖိလစ်ပိုင် အင်ဒိုနီးရှားတို့က တစ်ချိန်တုန်းက ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ အခု ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်တော့ဘူး။ သူတို့ မစောင့်ထိန်းလို့။ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်း ဘာလုပ်နေသလဲ စဉ်းစားစရာပဲ။
ကျွန်တော်ပြောတာ ဒီနိုင်ငံ မပျက်ဖို့ ပြောတာ။ ကျန်တဲ့ အထွေထွေ နောက်မှပြော။ လောလောဆယ်အမျိုးကို စောင့်ထိန်းဦး။ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်ကို မပျောက်ပျက် အောင်ထိန်းပါဦး။ HUMAN RIGHT နဲ့ တိုင်းတယ်ဆိုရင်လည်း ဒီစကားလုံးက မနေ့တစ်နေ့ကမှ ပေါ်လာတဲ့စကားလုံး။ လောကကြီးမှာ ” ဂငယ်” ကို ဘက်ပေါင်းစုံက ကြည့်ရင် သူ့ရှုထောင့်နဲ့သူ မှန်နေတာပဲ။
ဘုရားပေးခဲ့တဲ့ ပေတံနဲ့ပဲ တိုင်းပါ။ ကျွန်တော်တော့ ဒီပေတံပဲ ကိုင်ထားတယ်။ ဘုရားက အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ဖို့ ဟောထားပြီးသားပါ။
နေထက်လင်း VOL(1)NO(41)လူထုပုံရိပ်ဂျာနယ်See more
အင်းစိန်ရွာမ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တတိလောကာ ဘိဝံသအား အမျိုးသားရေးဝါဒီဆရာတော် ဦးဝီရသူ ဂါရဝပြု
“ဦးဝီရသူ အင်းစိန်ရွာမ ဆရာတော်ကြီးအား ဂါရဝပြု ဖူးမြော်” ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 10.9.2013 ရက်နေ့ မနက် 8:30 နာရီ၊ အင်းစိန်ရွာမ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တတိလောကာ ဘိဝံသအား အမျိုးသားရေးဝါဒီဆရာတော် ဦးဝီရသူ ဂါရဝပြု ဖူးမြော်ရာတွင် …အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အင်အားစု (NDF) ပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်နှင့် လူငယ်များလည်း ကြည်ညိုသဒ္ဒါ ပွားနိုင်ခဲ့ ကြသည်။ အင်းစိန်ရွာမဆရာတော်ကြီးက အမိန့်ရှိရာတွင် “ဆရာတော်တို့ရဲ့နောက်မှာ ဘယ်အဖွဲ့စည်းတွေက ကြိုးကိုင်နေတယ်။ ဘယ်သူ့ကို ကျဆင်းအောင်၊ မထောက်ခံအောင်၊ တမင်ကြံစည်နေတယ်လို့ ပြောကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဆရာတော်တို့ကတော့ အမျိုးဘာသာ သာသနာ မျက်နှာကိုပဲ ကြည့်မှာပါ။ ပါတီ၊ ဝါဒ၊ ဂိုဏ်းဂဏတွေ အစွဲအလန်းမထားပါဘူး” “ပါတီကြီးတွေက တင်ပေးရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ပါတီကြီးတွေက ဆန္ဒမရှိရင်လဲ ရှိတဲ့လူနဲ့ပဲ လုပ်သွားရမှာပါ။ ဆရာတော်တို့ အသက်နှင့်ခန္ဓာ တည်ရှိနေသ၍တော့ အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ကွက်လပ်ကြီးတစ်ခုကို မဖြစ်မနေ ဖြည့်ဆည်းပေးသွားမှာပါ။”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ NDF အမတ် ဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်ကလည်း အမျိုးစောင့်ဥပဒေကို မလိုလားသူများနှင့် လွှတ်တော်ပြင်ပ တွေ့ကြုံရမှုများကို ဆရာတော်ကြီးအား လျှောက်ထားပြီး အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို သုံးသပ်ပြခဲ့ပါသည်။ “အမျိုးစောင့်ဥပဒေနှင့် ၅၄-ခုနှစ် ထိမ်းမြားခြင်းဥပဒေ လုံးဝမတူဘူး။ ဒါက တစ်မျိုးသားလုံးအတွက် ပိုကျယ်ပြန့်တယ်။ ပိုလေးနက်တယ်။ အမျိုးစောင့်ဥပဒေ ပေါ်ပေါက်အောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းသွားမယ်။ “နိုင်ငံရေး လုပ်စားနေတာ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးထက် ပြင်းထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ စကားလုံးတွေနှင့် ထိုးနှက်လာရင်တောင် မမှုဘူး။ အမျိုးစောင့်ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆရာတော်တို့ ပေးအပ်တဲ့တာဝန်ကို ကြေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ပါမည် ဘုရား။”ဟု ပြန်လည် လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။See more
မဟာသန္တိသုခကျောင်းတော်ကြီး ပြန်ရအောင် ကြိုးပမ်း (4 photos)
Lin Htein, Natshin Naung and Thu Ya Tun like this.
မျိုး သိန်း မဟာသန္တိသုခကျောင်းတော်ကြီး ကို သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာန မှ ဦးဆန်းဆင့် က အပိုင်စည်းကာ သူ့ ကိုယ်ကျိုးအတွက် လူလည်ကျ လုပ်စားနေကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
11 September at 00:35 · Like
ဆရာတော်တွေက အသက်နဲ့လဲ၍ကာကွယ်သွားမည်ဆိုမှတော့ ငါတို့ တွေကဘာဖြစ်လို့ အသက်ပေးပြီးမကာကွယ်နိုင်ရမှာလဲ မှတ်ထားကြဟေ့(ငါ့ အမျိုးငါ့ဘာသာ ငါ့သာသနာအတွက် ငါပင်အသက်ဆုံးပါစေ နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ငါ ကြိုးစားပြီးလုပ်မှာပဲဟေ့) by လက်ရုဏ်း …………………………………………………………………………… သဘောတူညီတယ်ဆိုရင် Like နဲ့ comment လေးတွေ တွေ့ချင်တယ်..
Defense League – MDL’s photo.
….. မှန်ကန် တော့ ကွဲတတ်တယ်တဲ့……
လဝက+ကုလား+ငွေ=ကုလား မြန်မာနိုင်ငံဖြစ် ရဲ+ကုလား+ငွေ =ဗမာတွေထောင်ကျ / ကုလားလွတ်
By Burma Democratic Concern (BDC) in Burma Democratic Concern (BDC) on 13/09/2013 .
← Burmese (Myanmar) vs Japan Letwei (Burmese Kick Boxing) Challange on 21/09/2013 (Sat)	Burma:Dr Aye Maung on Illegal Immigrants Bengali Terrorism in Arakan (1+2) →